डिजिटल मार्केटि fund आधारभूतहरू: SEO बनाम पीपीसी बनाम एसएमएम
डिजिटल मार्केटिंग फाउंडमेन्टहरू: एसईओ बनाम पीपीसी बनाम एसएमएम
मार्केटिंग उद्योगले एक्रोनिम मन पराउँछ। दुर्भाग्यवस, यो ती व्यक्तिहरूका लागि भ्रमपूर्ण हुनसक्दछ जो विज्ञापनबाट जीविका चलाउँदैनन्। B2B, SEM, CMO, CPC; संक्षेपहरूको सूची यत्तिको अन्तहीन छ किनकि यो भ्रमपूर्ण छ।
जे होस्, सबै व्यवसाय मालिकहरू र अपरेटरहरूलाई उनीहरूको संगठनहरू बढ्न चाहेमा मार्केटिंगको आधारभूत समझ चाहिन्छ। त्यसोभए तपाईंलाई यी सबैको अर्थ बुझ्नको लागि, हामी आज तीनवटा डिजिटल प्रकारको मार्केटिंगमा हेर्नेछौं; तिनीहरू के हुन्, कसरी काम गर्छन्, र सेवाहरू जुन Semalt प्रत्येकका लागि प्रस्ताव गर्दछ।
एसईओ: संगठनात्मक वृद्धि तपाईंको वेबसाइट ट्राफिक
एसईओ खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसनको लागि हो। यो रणनीतिहरूको एक सेट हो र खोज इञ्जिन परिणामहरूमा देखा पर्ने वेबसाइटको सम्भावनाहरू वृद्धि गर्न डिजाइन गरिएको; अधिक विशेष रूपमा केही कुञ्जी शब्द र वाक्यांशहरूको लागि शीर्ष नजिक। यो भुक्तान गरिएको विज्ञापन मार्फत भन्दा ग्राहकलाई आकर्षित गर्नका लागि डिजाइन गरिएको हो।
मानौं तपाईं एक लन्डन कार धुने व्यवसायको मालिक हुनुहुन्छ। यदि लन्डनमा कोही कार धुलाई र Googles 'कार वाश लन्डन' खोज्न कोशिस गर्दैछ भने राम्रो SEO ले तपाईंको कम्पनीलाई पहिलो पृष्ठमा सूचीबद्ध गराउनेछ, र उत्तम SEO ले तपाईंलाई पहिलो स्थानमा प्राप्त गर्नेछ।
एसईओ कसरी काम गर्दछ?
खोज इन्जिनसँग तिनीहरू कुरा गर्छन् जसलाई 'क्रॉलर' वा 'बट्स' भनिन्छ जुन स collect्कलन गर्न वर्ल्ड वाइड वेबमा बाहिर जान्छ। प्रासंगिक जानकारीको प्रत्येक टुक्रा, जुन त्यसपछि विश्लेषण र अनुक्रमणिका हुन्छ। जब एक व्यक्तिले खोज बारमा कुञ्जी शब्दहरू टाइप गर्दछ, खोजी ईन्जिनले त्यसपछि एक चतुर एल्गोरिथ्म प्रयोग गर्दछ सम्भव सबै भन्दा सान्दर्भिक परिणामहरू थुन्न।
सबै खोज इन्जिनहरू (Google, बिंग, याहू!, आदि) उनीहरूको एल्गोरिदमको विवरण गोप्य राख्छ, त्यसैले कसैलाई थाहा छैन ठ्याक्कै नतीजा कसरी ल्याउने निर्णय गर्ने क्रममा प्रत्येक खोज ईन्जिनले के खोज्दैछ। जहाँ केहि लागू हुने नियमहरू छन्। राम्रो खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसनको साथ एक वेबसाइट:
खोजी ईन्जिन क्रलर/बट्सलाई सान्दर्भिक जानकारी पाउनको लागि सजिलो बनाउनको लागि डिजाइन गर्नुहोस्।
सुविधा गुणवत्ता जानकारी , भ्रमित भन्दा, प्रतिलिपि बनाइएको, डबल-अप वा अप्रासंगिक सामग्री भन्दा।
आफूलाई भरोसायोग्य देखाउनुहोस्। एक तरीकाले विश्वास प्रदर्शन गर्न सकिन्छ वेबसाइटको ब्याकलिksक्सको मात्रा मार्फत हो - यदि अन्य वेबसाइटहरूले तपाईंको साइटको सामग्रीमा लि are्क गर्दैछ भने, एक खोजी ईन्जिनले तपाईंलाई सम्मानित स्रोतको रूपमा देख्नेछ।
< div> त्यसो हो भने ती नियमहरू हुन् जुन तपाईले खेल्नु पर्छ, तर तपाई वास्तवमै कसरी राम्रो SEO प्राप्त गर्नुहुन्छ?
Semalt कसरी SEO प्रदर्शन गर्दछ
हाम्रो AutoSEO र FullSEO उत्पादनहरू, Semalt मा हामी तपाईंको साइटलाई अनुकूलित गर्न विभिन्न प्रकारका रणनीतिहरू प्रयोग गर्दछौं। खोज ईन्जिनहरू। यी प्रविधिहरूलाई चार मुख्य श्रेणिहरूमा समूहीकृत गर्न सकिन्छ।
हामी यसका लागि उत्तम कुञ्जी शब्द र वाक्यांशहरू बुझ्ने र पहिचान गर्न खोज्छौं। तपाईको ब्यापार - एउटा हो कि लक्षित र सम्भव सबै भन्दा बढी र सान्दर्भिक दर्शकहरु लाई आकर्षित गर्दछ।
हामी खोज्न खोज्छौं कि तपाइँको वेबसाइट को संरचना र खोजशब्द वितरण यो कसरी राम्रो खोज ईन्जिन अनुकूलन उत्तम अभ्यासहरूको साथ प with्क्तिबद्ध गर्न।
हामी पृष्ठहरू छनौट गर्दछौं जुन एसईओ मार्केटिंग उद्देश्यका लागि सब भन्दा प्रभावकारी हुनेछ।
हामी प्रतिस्पर्धी वेबसाइटहरूमा उनीहरूलाई कसरी काम गर्छ र कसरी हामी तपाईंलाई उच्च स्तरमा ल्याउन सक्छौं भनेर जानकारी संकलन गर्दछौं।
हामी तपाईंको वेबसाईटको इंटर्नल अनुकूलन गर्ने योजना बनाउन हाम्रो विश्लेषण प्रयोग गर्दछौं।
हाम्रो पहिलेको खोजशब्द विश्लेषण प्रयोग गरेर हामी उनीहरूको जानकारी स with्कलनको साथ क्रॉलरहरू र बट्सहरूलाई मद्दत गर्न मेटा र वेट ट्यागहरू सिर्जना गर्दछौं।
हामी तपाईंको वेबसाइटको एचटीएमएल कोडलाई बढावा र समृद्ध गर्दछौं, राखेर थपियो र बढाइयो एड सुविधाहरू जहाँ आवश्यक हुन्छ।
हामी .htaccess र robots.txt फाइलहरू सम्पादन गर्दछौं ताकि तपाईंको वेबसाइटले खोज ईन्जिनमा सही ढ disp्गले प्रदर्शन हुन्छ।
हामी तपाईंको साइटको म्याप फाइल उत्पन्न गर्दछौं तपाईंको पूरा अनुक्रमणिका सक्षम गर्नका लागि। वेबपृष्ठहरू।
हामी विश्लेषण गर्छौं के भनिन्छ तपाईंको 'लिंक जुस' - खोजी ईन्जिन मूल्य जुन एक पृष्ठ वा साइटबाट अर्को लिंकमा पार गरिएको छ।
हामी असमर्थित वा अनावश्यक लिंकहरू हटाएर वेबपृष्ठ गुणस्तर सुधार गर्छौं।
हामी संकलन गर्छौं। अधिक सान्दर्भिक र प्रभावकारी लिंकहरूको सूची र तिनीहरूलाई राख्नको लागि उत्तम ठाउँहरू पहिचान गर्नुहोस्।
हामी गुगलमा शीर्ष स्थानमा पुग्नको लागि आवश्यक को-विशिष्ट लिंक जुस सिर्जना गर्दछौं। हामी तपाईंको उद्योगसँग सम्बन्धित अद्वितीय सामग्रीमा क्वालिटी लि links्कहरू एकीकृत गर्दछौं।
हामी टुटेका लिंकहरू हटाउँछौं र कुनै त्रुटि 4०4 सन्देशहरू पत्ता लगाउँदछौं।
किन प्रयोग SEO?
आधा भन्दा बढि वेब ट्राफिक जैविक खोजीबाट आउँदछ। खोजी ईन्जिनका लागि तपाईंको वेबसाइट अप्टिमाइज गर्न असफल भएर, तपाईं आफ्नो आधा सम्भावित ग्राहकहरूको हराउनुहुनेछ।
खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसनले पनि तपाईंलाई व्यक्तिमा पहुँच प्रदान गर्दछ। जो वास्तवमा तपाईले बेचेको चाहानुहुन्छ - तपाईलाई कसैलाई चित्त बुझाउनु पर्दैन किनकि उनीहरुलाई तपाईको उत्पादन वा सेवा चाहिन्छ किनकि ती पहिले नै खोजिरहेका छन्! यस तरिकाले, यो उपलब्ध प्रभावी मार्केटिंग रणनीतिहरू मध्ये एक हुन सक्छ, जबसम्म यो सही भयो।
पीपीसी: लेजर-लक्षित सम्भावित ग्राहक
पीपीसी भनेको प्रति क्लिक भुक्तान गर्नुहोस्। यस प्रकारको डिजिटल मार्केटिंग खोजी ईन्जिनमा दृश्यता प्राप्त गर्ने बारेमा पनि हो, यद्यपि यस पटक तपाईको वेबसाइटलाई जीवन्त रूपमा उच्च र ranking्कि achieve प्राप्त गर्न अनुकूल गर्नु भन्दा तपाईले शीर्ष स्थानको लागि भुक्तान गर्नु हुन्छ।
पीपीसी विज्ञापनहरू खोज ईन्जिन परिणाम पृष्ठको शीर्ष (माथिको) मा लिंक हुन् जुन उनीहरूको छेउमा सानो [विज्ञापन] लेबल छ। गुगल डेस्कटप खोजीमा सामान्यतया चार र मोबाइलमा तीन छन्। तिनीहरूलाई प्रति क्लिक तलबका रूपमा संदर्भित गरिन्छ किनभने एक विज्ञापनदातालाई मात्र चार्ज गरिएको छ यदि एक प्रयोगकर्ताले लि link्कमा क्लिक गरेको छ।
पीपीसी कसरी काम गर्दछ?
कसरी PPC ले काम गर्छ तपाई कुन सर्च ईन्जिन छनौट गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ, तर हेर्दा Google ले % २% राख्छ। बजार सेयर , हामी तिनीहरूको उत्पाद, AdWords मा ध्यान केन्द्रित गरौं। गुगलले आफ्नो पीपीसी सामग्रीको लागि बिडिंग प्रणाली प्रयोग गर्दछ। एक विज्ञापनदाता को रूप मा, तपाईंलाई गुगल लाई एक निश्चित कीवर्डको लागि अधिकतम खर्च बताउन सोधिनेछ। यो जानकारी, विज्ञापनको 'गुणस्तर' को साथ संयुक्त, कुन विज्ञापन सुविधाहरू कुन खोजीमा निर्णय गर्न प्रयोग गरिन्छ।
पीपीसी विज्ञापन ठीक त्यस्तै हुन्: विज्ञापन। किनभने तपाईं राम्रो पैसा भुक्तान गरिरहनु भएको छ तपाईंसँग यी रणनीतिहरूमा एसईओ रणनीतिहरू भन्दा भन्दा बढि नियन्त्रण छ। तपाईले कुन पाठ, लिंक र जानकारी समावेश गर्न चाहानुहुन्छ छनौट गर्न सक्नुहुन्छ छविहरू प्रदर्शन गर्ने या नगर्ने, र प्रयोगकर्ताको क्रमबद्ध गर्न जुन तपाईं लक्षित गर्न चाहानुहुन्छ।
Semalt कसरी पीपीसी मार्केटिंगमा मद्दत गर्न सक्छ
Semalt मा हामी पीपीसी मार्केटिंग सेवाहरूको एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछौं। तपाईंलाई आफ्नो बजार बुझ्न, विज्ञापनहरू सिर्जना गर्ने, अभियानहरू प्रबन्ध गर्ने वा नतिजा विश्लेषण गर्ने सहयोगको आवश्यकता छ, विज्ञहरूको हाम्रो टोलीले पीपीसीलाई तपाईंको मार्केटिंग आर्सेनलमा मूल्यवान उपकरण बनाउन मद्दत गर्न सक्छ।
किन पीपीसी मार्केटिंग प्रयोग गर्नुहुन्छ?
त्यहाँ धेरै सुविधाहरू छन् जुन पीपीसी विज्ञापनको साथ आउँदछ, विशेष गरी जब एसईओको तुलनामा:
ग्यारेन्टी एक्सपोजर: तपाईले एक गुणस्तरीय विज्ञापन सिर्जना गर्नुभयो र उपयुक्त अधिकतम बिडमा राख्नुभयो भने तपाई निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईको ब्रान्ड Google खोज परिणामको माथि राखिन्छ।
लक्षित मार्केटिंग: तपाइँ कुञ्जी शब्द, समय, भूगोल, उपकरण र श्रोता खोजी ईतिहास मापदण्डहरूलाई अनुकूलन गरेर कसले तपाइँको विज्ञापन देख्नुहुन्छ छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
बजेट नियन्त्रण: तपाई पीपीसीको साथ कसरी नामांकन गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै तपाई खर्च गर्न चाहानुहुन्छ, र तपाईले आफ्नो लगानीबाट अपेक्षा गर्न सक्नुहुने फिर्ता तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ।
तत्काल परिणाम: एसईओ भन्दा फरक, पीपीसीले परिणाम अभियानको थालनी हुने बित्तिकै वितरण गर्दछ। ।
अपराजेय चपलता: के तपाइँको विज्ञापन अप्रभावी छ? कुनै समस्या छैन। पीपीसी विज्ञापनहरू रनमा ट्वीक गर्न सकिन्छ, र तपाईंको अभियान अझ राम्रो हुनेछ तपाईं अधिक सिक्न।
एसएमएम: एक ब्रान्ड सिर्जना गर्नुहोस् कथा र एक दर्शक फेला पार्नुहोस्
एसएमएम के हो?
एसएमएम सामाजिक मिडिया मार्केटि forको अर्थ हो। । यो डिजिटल मार्केटिंगको एक विविध र दूरगामी सेगमेन्ट क्षेत्र हो जुन विगत १० बर्षमा विस्फोट भएको छ र भविष्यमा अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
एसएमएमले भुक्तान गरिएको र जैविक दुबै विज्ञापनलाई कभर गर्दछ, जुन ब्राण्डले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब र लिंक्डइन जस्ता सामाजिक प्लेटफर्महरूमा आफूलाई प्रमोट गर्न प्रयोग गर्दछ।
एसएमएम कसरी काम गर्छ?
SMM दुई धेरै फरक तरीकाले आक्रमण गर्न सकिन्छ। तपाईं सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै प्रोफाईलहरू मार्फत ब्रान्ड र श्रोता निर्माण गर्न, वा पीपीसी जस्ता, तपाईं तुरून्त प्रयोगकर्ताहरूका आँखाको अगाडि जान भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने भुक्तानी गरिएको एसएमएम पीपीसीसँग मिल्दोजुल्दो छ, हामी यसको सट्टा जैविक ब्रान्ड र दर्शकको निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं।
सोशल मिडियाले ब्रान्डहरूलाई उनीहरूसँग संलग्न हुनको लागि अविश्वसनीय अवसर प्रदान गर्दछ। दर्शकहरु र व्यक्तित्व को विकास गर्न। सामग्री पोस्ट गरेर र अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर तपाईं आफ्नो कम्पनीको बारेमा एक कहानी भन्न सक्नुहुन्छ - यसको दृष्टिकोण, यसको विश्वास र यसको कारणहरू। यस तरिकाले SMM आफैलाई, तपाईंको उत्पादनहरू वा तपाईंको सेवाहरू प्रत्यक्ष रूपमा बेच्नको बारे होईन - यो सम्भव ग्राहकहरूको साथ विश्वास निर्माण र परिचितिका बारेमा हो। SEO जस्तै, यो एक दीर्घ-अवधि मार्केटिंग खेल हो।
कुन Semalt सेवाहरूमा SMM समावेश छ?
Semalt मा हामी एसएमएम सेवाहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछौं। चाहे तपाइँलाई बुझ्न वा तपाइँको ब्रान्ड पहिचानको विकास, सामग्री सिर्जना गर्ने, तपाइँको प्रोफाइलहरू प्रबन्ध गर्ने वा तपाइँको प्रयासहरूको नतीजाहरूको विश्लेषणका साथ सहयोग चाहिन्छ, विशेषज्ञहरूको टोलीले तपाइँको सामाजिक मिडिया उपस्थितिलाई तपाइँको ब्रान्डलाई स्थापित र सुदृढ बनाउने र नयाँ बनाउन मद्दत पुर्‍याउन मद्दत पुर्‍याउँछ। ग्राहकहरू भित्र।
किन एसएमएम मार्केटिंग प्रयोग गर्नुहुन्छ?
एसएमएमले केहि अद्वितीय लाभहरू प्रदान गर्दछ जुन मार्केटिंगका अन्य प्रकारहरूले गर्दैन। सहित:
दृश्य आकर्षक विज्ञापन: दृश्य मीडियामा आफूलाई गर्व गर्ने कम्पनीहरूको लागि सोशल मिडिया उत्कृष्ट छ। इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्महरू प्रत्यक्ष बिक्रीमा सौन्दर्यलाई प्राथमिकता दिन्छ।
थोरै नियमहरू: तपाईंको आफ्नै प्रोफाइलको मालिकको रूपमा, र तपाईंको श्रोताको लागि प्रत्यक्ष रूपमा बेच्नको आवश्यकता बिना, तपाईं लगभग केही पनि पोष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं चाहनुहुन्छ! त्यस्तो चीज पोष्ट गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ जुन तपाईका दर्शकहरूले मूल्यवान पाउनेछन्, तथापि, मनोरन्जन वा शिक्षाको सर्तमा।
T उसले कथा भन्न अवसर पायो: तपाईको ब्रान्ड के हो? धेरै मालिकहरू तिनीहरूको कम्पनीको सार वर्णन गर्न असमर्थ छन्, तर तपाईं को हुनुहुन्छ भनेर जान्दै तपाईंलाई तपाईंको दर्शकलाई राम्रो विज्ञापन गर्न मद्दत गर्दछ। सामाजिक मिडियाले संगठनलाई यसको पहिचानको अन्वेषण गर्न र विकास गर्न अनुमति दिन्छ।
जब सही गरे राम्रो: यदि तपाइँ एसएमएम राम्रोसँग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ लगानीको आवश्यकता बिना नयाँ ग्राहकहरूको स्थिर स्ट्रिमको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ। सबै मा धेरै पैसा। भुक्तान विज्ञापनमा भर पर्नुको सट्टा तपाईका प्रोफाइलहरूले तपाईको लागि कडा मेहनत गर्छन्!
जबकि एसईओ, पीपीसी र एसएमएम को मूलभूत एक १00०० शब्दमा कभर हुन सक्षम हुन सक्छ। ब्लग, वास्तविकतामा, प्रत्येक अनुशासनमा यति धेरै छ हामी यहाँ भन्न सक्छौं। धन्यबाद विज्ञहरू केवल एक क्लिक टाढा छन्।
Semalt मा हामीसँग धेरै वर्षहरू छन्। तपाइँ जस्तो कम्पनीहरूको लागि उद्योग को अग्रणी मार्केटिंग रणनीति विकास मा अनुभव को। हामी तपाईंलाई कसरी मद्दत गर्न सक्दछौं भनेर जान्नका लागि आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!